Mari yeFormula 1 inodhura zvakadii "Mari yeFormula 1 mota inogona kusvika pamitengo kubva pa600 zviuru kusvika pamiriyoni yemadhora" manyepo anobuda pachena, nekuti Maria Morgun akandiudza mumaziso angu chaimo: ...
Mujaho ane mukurumbira weFormula 1 ikozvino Schumacher. Vanhu veimwe chizvarwa vaive nezvimwe zvidhori - Alain Prost, Ayrton Senna. Senna Aerton Senna (kusvika pakati pemakore makumi mapfumbamwe) Gare gare - Schumacher Chokwadi Schumacher Kazhinji ...
Chii chinonzi slalom? Shoko - SLALOM: Mumitambo: yekumhanya-mhanya kufamba pamwe yakapihwa ichitenderera nzira. -akakura uye hofori c. kuburuka kubva kumakomo pamasiki achitevedza nzira refu. Mvura-skiing musha Mhepo s. on…
Ndeipi yekumhanyisa kumhanyisa kwemota yeFormula 1 Zvinoenderana ne Sportbox.az maererano neGrandPrix247, Bottas yakamhanyisa kuenda ku2,2 km / h munzira ine makiromita 378 pakureba panzira huru yeBaku. Rekodhi rapfuura raive ...
0113 - Inotora mweya tembiricha yemhepo, yakakwira kuburitsa. Mu "Boshevsky" mashoma mweya inoyerera maseru, iyo ambient tembiricha sensor inosanganiswa. Mumamiriro ako ezvinhu, sezviri kufanana. Kana paine zvikanganiso zviviri uye yakakura mhepo inoyerera sensor ...
Mibvunzo ye68 mu database yakagadzirwa mu 2,295 masekondi.